It is me. Ko Niknayman.: ကြံ ဖွံ့အသင်း ၀င် တစ်ဦး၏ အမြင်မှန်နှင့် ကြေညာချက်။
ကြံ ဖွံ့အသင်း ၀င် တစ်ဦး၏ အမြင်မှန်နှင့် ကြေညာချက်။
ဤ ကြံ ဖွံ့အသင်း ၀င် ကဒ် ပိုင် ရှင် ကျနော် သည် အသင်း ၏ပြည်သူ့အပေါ်ထား ရှိ သည့်ဆန္ဒ ၊အသင်း ၏လမ်း ညွှန်ချက် များနှင့်အသင်း ၏ စက် တင် ဘာလအတွင်းက ရဟန်း သံဃာ များ အပေါ်တွင် ရိုင်းစိုင်းစွာ
ရိုက် နှက် ခဲ့ သည်များ အပေါ် တွင် စက်ဆုတ်ရွံရှာ မိပါ သဖြင့်၊ မည် သူတဦး တယောက် ၏သွေးဆောင် ဖျားယောင်း မှု့့ မပါ ပဲ၊ မိမိ၏သဘောဆန္ဒဖြင့်နုတ် ထွက် လို က် ပါ ကြောင်း... ပြည် သူ များ အား အသိပေး အပ် ပါ သည်။်
Posted by Ko Niknayman at 3:06 AM